MUTARE, Zimbabwe (Thomson Reuters Foundation) - A combination of late, heavy rains and a shortage of cattle dip have contributed to a rise in tick-borne diseases in Zimbabwe this year, a government official said.
MUTARE, Zimbabwe (Thomson Reuters Foundation) - After years in which the disease presented only a limited threat, this city in eastern Zimbabwe is seeing a hike in malaria deaths, with more than 30 recorded in 2017, city officials say.
MAFUKE, Zimbabwe (Thomson Reuters Foundation) - Farmers in Zimbabwe are anxiously watching their crops, fearing the return of a plethora of new pests that recently spread to the southern African nation and devastated harvests this year.
MUTARE, Zimbabwe (Thomson Reuters Foundation) - When Sheila Chimoyo's husband died in 2011, it didn't take long before accusations started to fly.
ZIMUNYA, Zimbabwe (Thomson Reuters Foundation) - Henry Fusirayi Nzarayebani, an elder in Zimunya, a village in eastern Zimbabwe, walks slowly toward plants growing at the edge of a narrow dirt foot path.
NYANYADZI, Zimbabwe (Thomson Reuters Foundation) - In this drought-prone region of eastern Zimbabwe, relying on rain to grow crops no longer makes sense.
TARKA FOREST, Zimbabwe (Thomson Reuters Foundation) - Thousands of unemployed Zimbabweans have turned to illegal gold panning in a bid to survive the country's deteriorating economy, leaving a trail of destruction that has alarmed farmers, timber plantation owners and the country's environmental authorities.